Lampone Pi, Live-chete Raspbian yeRaspberry Pi | Linux Vakapindwa muropa
Ini handisi fan mukuru weRaspbian. Yakajairwa masisitimu ane akajeka uye akajeka mamiriro enzvimbo, iyo sarudzo iyo Raspberry Pi inotipa isu yemabhodhi ayo ndiyo inoshanda zvakanyanya maererano nekuenderana, asi inosiya zvakawanda zvekuda mune zvimwe zvinhu. Uye zvakare, pane inopfuura imwe chiitiko inomira kushanda mushure mekuvandudzwa, chimwe chinhu chichava chisingaite mu Lampone Pi yekuwanikwa chete muLive mode.
Zvese izvi zvinotsanangurwa pane yepamutemo peji reiyo purojekiti, iyo yatinokwanisa kuwana kubva Iyi link. Mufananidzo wavanosanganisira pane iyo huru peji ndechimwe chakagadzirirwa kutityisa kana kumutsa kumwe kunzwa, sezvo iri Raspbian inoratidza zvikanganiso zvakakomba izvo zvinogona kukonzera kuti sisitimu irege kushanda. Kune zvese zvimwe zvinhu, ivo vanotsanangura izvo, zvirinani izvozvi, ndiyo chete inoshanda sisitimu yeRaspberry Pi inoshanda pairi Rarama mode, chimwe chinhu chakafanana nezvakagoverwa zvakaita se buttonpix Uye ikozvino isu tinogona kuita neanogona chero munhu kana isu tikasika Live USB, iyo zvakare inowanzotibatsira isu kuisa iyo inoshanda sisitimu.
Lampone Pi, iyo yega sisitimu yeRaspberry Pi muRarama modhi
Lampone Pi, ingangoita iyi yekutanga vhezheni, iri zvichibva paDebian GNU / Linux Buster (10), uye iri ruoko64 vhezheni yacho iyo yakagadzirirwa maRaspberry Pi mabhodhi. Ivo havana hukama nekambani yeRaspberry, asi ivo vanotsanangura kuti ndeye Raspbian Lite shamwari, nemusiyano wekuti iri Live 64bit inoshanda sisitimu, kunyange iine chikamu chinoramba chiripo:
Padivi rehunyanzvi, iyo Debian arm64 inogadzirwa neakasarudzika chirongwa chekuparadzanisa chakagadzirirwa kuwedzera simba kupokana nefaira system huori - iyo ISO9660 system partition inoverengwa-chete nekugadzirwa padanho rehurongwa hwefaira. Iyo yekutsungirira kwedatha kupatsanura ine chete iyo delta - system inogadziridza uye yako data iriko.
Iyo dhata yekuparadzanisa yakaiswa pamusoro pekuverenga-chete sisitimu yekuparadzanisa inoita iyo inoguma yekushandisa sisitimu inopesana nefaira system huori. Zvakare, iwe unogona kuita yakazara system backups neinongori tar-mhete chete mafaera ari mukati meiyo chikamu.
Nezvose zvakatsanangurwa, kana iwe uine Raspberry Pi, wave nenyaya dzeRaspbian, uye uine imwe kadhi reSMSD, ndinofunga iyo Lampone Pi yakakodzera kuyedza. Iyo kuisirwa tinogona kuita naEtcher, sezvatinotsanangura ichi chinyorwa, kana nechombo Kufungidzira mukuru. Lampone Pi, ane rutsigiro harutaure nezve Raspberry Pi 4, inowanikwa pa Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Lampone Pi, Live-chete Raspbian kudzivisa matambudziko anogona kuchinjirwa neshanduko pane yedu Raspberry Pi
Iyo beta yeLinux Mint 20 "Ulyana" yave kuwanikwa, ziva nhau dzayo